Shipping Policy | KarmanHealthcare.com
Kutumirwa kwemahara pamaodha ese anopfuura $199.99
Kutumirwa kwepasi kwakajairika NDIKO MAHARA kune ese maodha anopfuura $199.99 mukondinendi United States. (Mitemo inotumirwa kuAlaska neHawaii inowedzerwa kune dzimwe mari dzekutumira. Iwe uchada kutifonera pa 1-626-581-2235 kuti uwane imwe quote yekutumira). Maodha anotumirwa kuburikidza neFederal Express kana UPS. Zvizhinji zvinhu zvichagamuchirwa mukati 3-5 bhizinesi mazuva mushure mekunge waisa odha yako.
Mamwe maStanding edu makuru Mawiricheya uye Simba Mawiricheya uye mamwe asingapete Active Mawiricheya vachasvika nekambani yekutakura zvinhu mumazuva e5-7 ebhizinesi kubva pavanobva mudura redu. Kambani inotakura zvinhu ichakubata iwe kana chinhu chasvika panzvimbo inotakura zvinhu munharaunda yako kuti ironge imwe nguva yekuendesa yakakunakira iwe.
Kana iwe uchida mamwe chaiwo ruzivo rwekutumira usati waisa odha yako, ndapota tifonere pa 1-626-581-2235.
Kukurumidza Kutumira Zuva Rinotevera uye 2nd Day Shipping inowanikwa pazvinhu zvakawanda. Ndapota cherechedza kuti nguva yekutumira inobva apo chinhu chacho chagadzirira kubva mudura. Kukurumidza kutumira kunowanikwa kutumirwa kubva Muvhuro kusvika Chishanu chete. Ndokumbirawo mutifonere pa 1-626-581-2235 kuitira kukurumidza kutumira quote.
Kana uri kuenda kuUSA kana uri kunze kweUSA uye uchida odha inotumirwa muUSA ndapota tifonere pa1-626-581-2235. Isu hatitumire kunze kweUSA. Kana iwe uchida kuti chimwe chezvigadzirwa zvedu zvitumirwe kwauri kunze kweUSA unozofanirwa kuti chitumirwe kune shamwari kana mutakuri muUSA uye kuti vatumire kwauri. Inzwa wakasununguka kutifonera pa1-626-581-2235.